'आज धेरै ताराहरु खस्छन, जे माग्यो त्यहि पुग्छ' - Netizen Nepal
‘आज धेरै ताराहरु खस्छन, जे माग्यो त्यहि पुग्छ’
in नेटिजन मंच, मनोरन्जन
काठमाडौँ, १ साउन । साउन महिना, बर्खे झरी झमझम पर्ने समय । हामीलाई झरीको कुनै प्रवाह थिएन । किनकि हामीलाई साउने संक्रान्ति अर्थात लुतो फाल्ने दिन मनाउनु थियो । पानी एकैछिन रोकिएको थियो । भाई, बहिनी र म लुतो फाल्ने सामान खोज्न जंगलतिर लाग्यौं । हामीलाई थाहा थियो लुतो फाल्न कुनकुन बिरुवा चाहिन्छ भनेर । भलायोको पात, पानीसरो, कुरिलो, कुकुरदाइना, बेतलौरी, सर्पको मकै यस्तै यस्तै । यसमध्ये सबैभन्दा धेरैचाहिं कुरिलो खोज्नु थियो। किनकि कुरिलोको बोट आगोमा बाल्दा औधी रमाइलो हुन्थ्यो । त्यसको पात बाल्दा अहिलेको बालबालिकाले झिरझिर गर्ने पटाका बाल्छन नि त्यस्तै हुन्थ्यो ।
लुतो फाल्ने सामान खोज्न जाँदाजाँदै पानी पर्न थाल्यो । यो बर्खाको पनि भर नै नहुने। अघि घाम लागेर छ्याङ्ग उघ्रिएको मौसम कति छिटो बादलको घुम्टोमा चिहाएर हामीलाई भिजाउन आइपुगेको । हातमा हँसिया थियो । केराको पात काटेर तीनै जनाले ओड्यौं । अरु बेला पनि बाहिर निस्किएपछि पानी पर्यो भने हामी त्यसै गर्थ्यौं । कहिले केराको पात कहिले पिंडालुको पात । अहिले पनि बाहिर निस्किएरपछि पानी पर्यो भने मलाई पिंडालुको पातको झल्को आउँछ ।
पिंडालुको पातमा तपतप परेको पानी । पानी पातमा झर्छ, थोरै पातमै जम्मा हुन्छ, फेरि पात थोरै ढल्किन्छ, पानी पोखीहाल्छ । म पिंडालुको पात र पानीको लुकामारी धेरैबेर नियाल्छु । फेरि पातमा आफैंले पानी जम्मा गरिदिने प्रयत्न गर्छु । तर पानीले अडिन मान्दैन । त्यसपछि निष्कर्ष निकाल्छु, प्रकृतिले बनाएको कुनैपानि चिजमा मानिसले जोरजबर्जस्ती गर्नु मुर्खता शिवाय केहि होइन । कर्कलाको पानी र मानिसको जिन्दगानी पनि उस्तै उस्तै । कर्कलाको पानी पनि ढल्किएपछि सकिन्छ, मानिसको जिन्दगि पनि ढल्किन्छ अनि सकिन्छ । कर्कलाको पानीलाई पनि पात ढल्किएको पत्तै हुँदैन, हामीलाई पनि दिन ढल्किएको पत्तै हुँदैन । त्यसैले त मलाई कर्कलाको पात ओडेको समय हिजोमात्र हो जास्तो लाग्छ । वर्तमानलाई चिहाउन खोज्छु। वर्तमान त भेट्टाउनै नसक्ने गरि टाढा पुगिसकेको हुन्छ ।
पातको छाता ओडेर हामी धेरैबेर जंगल चाहार्यों । तर केहि भेटेनौं । आमाले बिहानै घरमै ज्ञानी भएर बस्न चेतावनी दिसक्नुभएको थियो । आमा घरमा नभएको बेला हामी आफैं जान्ने भएर जंगल गएका थियौं । पानी परेको बेला जंगलमा हिंड्नु त्यति सहज थिएन । कतिपटक कटुसको पातमा चिप्लिएर लड्यौं पत्तै भएन । यो लुतो फाल्ने काम हामीबाट नहुने रहेछ भन्ने चेत खुलेपछि हामी घर फर्किने निधो गर्यौं । घर फर्किंदै गर्दा बाटोमा नास्पातीको बोट देख्यौं । नासपातीवाली आमैले देख्नुभयो भने सातो जानेगरि कराउनुहुन्थ्यो । गाली गर्नुहुन्छ भनेर, नासपाती चोर्नै छाड्नु त भएन । हामी तीनैजना नास्पातीको बोटमा चढ्यौं । हामीलाई नासपाती खानु थिएन । नासपातीको बोट त घरमा पनि थियो । हामीलाई एक झमेट गाली खानु थियो । एकएक ओटा नासपाती टिपेर रुखमै बसेर खान थाल्यौं । त्यो दिन बुढी आमै वरिपरि नै देखिनुभएन ।
‘ओइ, आज बुढी आमै कता जानुभएछ ? कराउनै आउनुहुन्न त ! मैले भनें ।
होलान नि घरतिरै छुच्ची बुढी, बहिनीले जवाफ फर्काइ ।
धेरैबेर भएपछी हामी रुखबाट ओर्लिने निधो गर्यौं । झट्ट तल के हेरेको बुढी आमै रुखको फेदमा। हाम्रा सबै कुरा सुनेर बसिरहेको । टाढाबाट गालि गरेको भए पो भाग्दा मजा आउँथ्यो । अब रुखमै छौं, कहाँ भाग्ने ? धन्न ! बुढी आमै रुख चढ्न सक्नुहुन्नथ्यो । आमै फेदमा, हामी रुखमा । हामी रुखबाट तल झरेनौं, आमै तल बसेर गालि गर्न छाड्नुभएन । अन्त्यमा, गालि सकिएपछि आमैले भन्नुभयो, ‘ल रुखमै गइहालेछौ, मेरा लागि पनि नासपाती झार्देउ ।’
काम अर्हाउनु नै रहेछ त गालि किन गर्नु ? हामीले आफ्नो बदमासी र आमैको गालि सबै बिर्सिएर नासपाती झारीदियौं र घरतिर लाग्यौं ।
घर पुग्दा हामी ढेडु बाँदरजस्तै भएका थियौं । भिजेर, चिप्लिएर हिलो र मैलो । आमाले ढेडु नै भनेर थोरै गालिको वर्षात गराउनुभयो। असली बर्खा त हामीलाई लागेको थियो । उता आमैको गालीको वर्षात, यता आमाको गालीको वर्षात र बाहिर पानीको वर्षात । यो सबै लुतो फाल्ने दिनको कमाल हो । आमाले सबै सामाग्री ल्याईसक्नुभएछ । आँगनमा सानो छाप्रो बनाएर सबै सामाग्री राख्यौं । भलायो, पानीसरो, कुरिलो, कुकुरदाइना, बेतलौरी, सर्पको मकै, काँचो फलफुल (जस्तै: नासपाती, अम्बा, निबुवा) , हरियो मकैको बोट, सल्लाको दाउरा, पुजाको सामाग्री यस्तै यस्तै ।
साँझ पर्नासाथ लुतो फाल्ने तयारी भयो । आमाले सल्लाको दाउरा काटेर टुक्रा टुक्रा बनाउनुभएको रहेछ । हामीले आगोमा कुरिलोको बोट जलायौं । मन त्यसै रमाएर आयो । अब लुतो फाल्ने बेला भयो । हामीले चारैतिर आगोको झिल्को उड्नेगरि सल्लाका टुक्रालाई हुत्यायौं । आगाको झिल्का हावामा उड्दै गर्दा लुतो जाओस भनेर कामना गर्यौं । त्यो लुतो सांकेतिक लुतो थियो । खुसिका केहि झिल्क्काहरु जिवनबाट कहिल्यै नाजाओस र जीवनका नकारात्मकताका झिल्काहरु सधैंका लागि टाढा जाओस भन्ने कामना थियो ।
त्यसपछि, हामीले छरछिमेकी र पारि गाउँमा समेत लुतो पालेको हेर्यौं । पर्व मनाइरहेको आवाज, नाग्लो ठटाइरहेको आवाज सबैतिर गुञ्जियो । चारैतिर आगाका झिल्काहरु देख्दा लाग्थ्यो, हामी अर्कै संसारमा छौं । तारामण्डलमा छौं । आज धेरै ताराहरु खसेका छन् । हामीले जे कामना गर्छौं त्यहि पुग्छ ।
Tags: तारापरिधीपार्वती अधिकारीसाउने संक्रान्ति